के छ लोकसेवाले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
के छ लोकसेवाले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ?
प्रकाशित मिति : २०७६, १९ कार्तिक मंगलवार १३:४१
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले ६० आँै वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यक्ष मैनालीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले हरेक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका कामको प्रगति विवरण राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने गरेको छ ।
आयोगले २०१६ सालमा पहिलो पटक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले आयोगलाई अझ स्वच्छ र मर्यादित बनाउने बताए ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ८७ बैठक गरी २ सय ९७ वटा निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदनमा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न तहका पदका लागि ३० वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली । मुलुकमा सङ्घीयता संरचना कार्यान्वयमा आएपछि कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग सुर्खेत पहिलोपटक
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले यही चैत २६ गते निर्धारण गरेको शाखा अधिकृत
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले थारु कल्याणकारिणी सभाले दायर गरेको विज्ञापनसम्बन्धी रिटमा लिखित जवाफ पेस